Wall Mount Pot Filler Kicheni Faucet
musha / Kicheni Faucets / Pot Yekuzadza Faucets / WOWOW Wall Mount Pot Kuzadza Kicheni Faucet
kicheni pot dhiza yekukwirira pamusoro pechitofu Kutaridzika kwese kunoratidzika uye kwakapusa.
Iko kutaridzika kwechrome-yakagadzirirwa kunoita kuti faucet iite seyakajeka.
Iyi inoyevedza uye yakapfava muhari yekuzadza faucet 2311300C pakakwirira pamusoro payo, chikamu che spout chinogona kutenderera 360 degrees kusangana nezvinodiwa nemvura chero engona, zvichiita kuti mvura yekukicheni ive nyore. Iyo tatu-nhanho dhizaini iri nyore pane zvinodiwa kune ese ma angles, asi zvakare inowedzera humwe hupenyu kuravira. Iyi yakapeturu dhizaini faucet inowedzera kunaka pakubata kwekupedzisa kubata kwekicheni.
Yakakwirira-Yepamusoro Minimalistic Faucet: yakagadzirwa nendarira yakasimba, inogara kwenguva refu nehupenyu hwekushumirwa; brunch nickel kupedzisa, anti-kutu, hapana nyore kusiya zvigunwe, zviri nyore kuchenesa; chubhu yendarira yakasimba, kunyorova-chiratidzo uye kusagadzikana kunodzivirira; dhizaina patent mune minimalistic, yakakodzera kugadzira yemazuva ano maitiro epamba
Flexible Kushanda, Space Kuchengetedza: kaviri kwakabatana dhizaini, 360 degree kutenderera, inochinjika kushandisa; kaviri vharuvhu dhizaini yekuita miviri inoyerera control, iri nyore kushanda; chengetedza nzvimbo yakaringana yechitofu yakamanikana
Rakakura kuyerera, Yakagadzika Mvura Inoyerera: Neoperl ABS aerator, ichipa yakatsetseka yakakura kuyerera kwemvura, kusangana nekukurumidza kweputi-yekuzadza dhizaini, splash-proof design; kuchengetedza mvura hutsanana: yakavakirwa-mukati ceramic vharuvhu kusimbisa kusadonha uye kutungamira-isina kuchena
American Standard Saizi, Hwakanaka Kuisa Zvikamu: 1/2 "NPS - 1/2" NPT yeAmerican standard yekubatanidza, inokodzera chero saizi yekicheni chitofu, nyore kuisa; ChiGerman Fisher nylon anchor, mhando yepamusoro uye yakasimba
90-Zuva Rekudzoka Kwemahara, 5-Year Waranti, 7/24 Tsigiro yevatengi; kana zvichidikanwa, ndapota taura nesu ❤service@wowowfaucet.com
Kana isiri kushandiswa, inogona kupetwa kumadziro kuti ishandise nzvimbo, kudzikisira ndarira kukanda, mbiri mbiri yekudziya mvura inopisa uye inotonhora, kupisa kwakanyanya kuputika-chiratidzo chekupwanya kupokana, zvizere zvinongedzo, unogona kuzvimisikidza usatenga.
SKU: 2311300C Categories: Kicheni Faucets, Pot Yekuzadza Faucets Tags: Bronze Nickel, Solid Brass, Chitofu
360 Degree Kutenderera, Double Joint, Kupeta
WOWOW Gooseneck Kicheni kicheni faucet Ne Dhonza Out Sp ...